Falanqaynta: Realme 9 Pro +, weerarka dhexda oo ay soo jeedisay sumadda | Qalabka Wararka
Falanqaynta: Realme 9 Pro +, weerarka dhexda oo ay soo jeedisay sumadda
Waxaan la soo laabaneynaa falanqaynta macnaha siinaya bulshadeena, markan oo leh taleefan casriga ah oo ka yimid calaamad aan la soconnay tan iyo markii uu soo degay Spain, waxaan si cad uga hadlaynaa Realme Markan oo wata banner cusub oo ujeedadiisu tahay in la jebiyo xasilloonida dhexda.
Nagala soo bax Realme 9 Pro + cusub, oo ah terminal leh khamaar qalab weyn, miyay u qalmi doontaa? Waxaan kuu sheegaynaa dhammaan siraha ku jira falanqayntan qoto dheer ee Realme 9 Pro + cusub, beddelka saxda ah ee shirkadda doonaysa inay ku dhufato miiska, aan aragno inay ku guulaysato.
3 Shaashadda, warbaahinta badan iyo madax-bannaanida
Mar labaad naqshadeynta Realme waxay muuqaal ahaan ka sarraysaa waxa aynu ka helno xagga tayada la dareemo. Muraayadda dib u leh module saddex-camera ah oo soo jiidasho leh oo ka samaysan methacrylate, halka qaybta hoose ay u tahay USB-C iyo ku dhawaad ​​dabar-goynta, laakiin si fiican loo arko 3,5mm jaakad jaakad taleefoonnada gacanta ah. Bezel-ka midig ee badhanka qufulka iyo gadhka bidix ee furayaasha mugga. Way dhacdaa, sida Realme kale oo badan, taasi Qaabka talefanku wuxuu ka samaysan yahay polycarbonate (cag), shay caadi ah oo u oggolaanaya dhimista miisaanka iyo gaar ahaan kharashyada.
Miisaanka: Gram 128
Dhumucdiisuna: 8 milimitir
Midabada: Saqda dhexe Madow - Cagaar - Shift iftiin ah (oo leh midab isbeddel)
Waxaan haynaa kaliya 128 garaam oo dhumucdiisu tahay 8mm kaas oo ku duudduubay terminal kaas oo, sida aad si fiican u taqaan, uu leeyahay 6,43-inch panel oo leh qaab hoose oo caadi ah iyo kamarad selfie ah oo ku taal geeska bidix ee sare. Waxay qaataan aag dambe oo xoogaa qalloocan si ay u fududeeyaan qabsashada iyo qaab fidsan sida astaanta warshadaha ee hadda jirta.
Shaki kuma jiro Realme 9 Pro + Marka la eego heerka muuqaalka, waxay u muuqataa in ka badan inta aan ka helno soo saarideeda, laakiin tani maahan dhibco xun haddii aan xisaabta ku darno in balaastiggu uu bixiyo iftiin iyo iska caabin, si cad uma wajahayno terminal sare mana iska yeelyeelo. ahaansho.
Waxa ugu horreeya ee nagu soo dhacaya waa taas oo ka duwan moodooyinka hoose ee isku midka ah, tani Realme 9 Pro + Ku dheji processor MediaTek, waxaan ka hadalnaa Cabirka 920 Octa Core, Processor-kii ugu dambeeyay oo soo bandhigay awoodihiisa farsamo oo si sax ah ugu horumariya imtixaanadii aanu samaynay. Dhankiisa waxaa weheliya 8GB ee LPDDR4X RAM iyo 128GB ee kaydinta UFS 2.2 taasi waxay keentay in ka badan 500.000 dhibcood gudaha Antutu.
Processor: MediaTek Dimension 920
Kaydinta: 128GB UFS 2.2
Processor-ka ayaa la sameeyay qaab dhismeedka 6nm iyo dhanka GPU-da waxaanu leenahay ARM Mali-G68 MC4 kaasoo si fiican uga soo baxay imtixaanada garaafyada. Waxaas oo dhan waxa la socda 5GB oo ah Dynamic-RAM, oo ah xusuusta dalwaddiinta ah oo aynu ku hagaajin karno tallaabooyinka laga bilaabo 2GB ilaa 5GB iyadoo ku xidhan baahideenna.
Ku saabsan isku xirnaanta, Processor-kani waxa uu leeyahay awood 5G ah Qeybaha ugu caansan, laga soo bilaabo wixii aan awoodnay inaan xaqiijinno, waxaan haynaa dabool, inkastoo xawaaruhu ka fog yihiin wixii ay shirkaduhu ballanqaadeen sababo ballaarinta aan loo nisbeyn qalabka. Oo ay la socdaan kuwa caadiga ah Bluetooth 5.1, WiFi 6 iyo dabcan NFC si aan lacag u bixino oo aan u aqoonsano nafteena.
Shaashadda, warbaahinta badan iyo madax-bannaanida
Waxaan haynaa 6,43-inch Samsung-made AmoLED panel iyo leh Heerka cusbooneysiinta 90Hz oo ay la socoto dareeraha faraha ee shaashadda kaas oo sidoo kale leh awoodaha cabbiraadda garaaca wadnaha. Waxaa lagu magacaabi lahaa 120Hz, laakiin waxaan qiyaasaynaa in marka la eego waxqabadka shirkadu ay dooratay kaliya 90Hz kuwaas oo horayba uga sarreeya sidii caadiga ahayd. Waxaan haynaa guddi si fiican loo hagaajiyay, oo leh dhalaal wanaagsan, taasina, aragtidayda, waa mid ka mid ah qodobbada ugu wanaagsan ee terminalka.
Dhanka qaybta warbaahinta badan, waxaanu haynaa dhawaaq u muuqda inuu yahay stereo iyada oo aan sidaas ahayn, in kasta oo ay sheeganayaan in ay la jaan qaadayaan tignoolajiyada. Dolby Atmos iyo Ambient Sound iyada oo loo marayo nidaamkan isteerooga asymmetrical. Si la mid ah Realme waxay noo ballan qaadaysaa Hi-Res Gold ee codka, inkastoo aynaan noo suurta galin in aan si dhab ah u xaqiijino qaybtan farsamo.
Dhanka madax-bannaanida, terminaalkan ku dhawaad ​​190 garaam ayaa kor u kacaya batari weyn oo ah 4.500 Mah Kaas oo sida iska cad aan lahayn dallacaadda wireless-ka, halka aan haysanno kuwa si fiican loo yaqaan 60W lacag deg deg ah Terminal-yadan oo leh algorithmization load VTF. Dabcan, dabeylaha ku jira wuxuu leeyahay deked USB-A, wax wali naga yaabinaya hirgelinta USB-C oo badan oo aan la kulmeyno. Marka la soo koobo, waxaan haysanaa 50% terminalka lagu soo raray 15 daqiiqo oo kaliya.
Realme waxay isku daydaa inay inta soo hadhay ku tuurto dareere uu sameeyay Sony(IMX766) Iyada oo la adeegsanayo xasilinta OIS oo aan ka yarayn 50MP, aan eegno kamaradaha shaxanka:
Maamule: 50MP Sony IMX766 f/1,8
Lens Xagal ballaadhan: 8MP f / 2,3
Qoto dheer: 2MP f / 2,4
Xaaladdan oo kale, waxaan ku adkaysanayaa in kor u qaadista dareemayaasha si ay u sameeyaan cutub weyn oo aan ku dhammaanayn waxtarka, wax Google uu ku muujiyay xajmiga Pixel. Waxaan leenahay dareemaha si fiican isaga difaacaya xaaladaha wanaagsan oo aan dhib badan ku qabin Habka Habeenka, inkasta oo dareemayaasha intiisa kale ay muujinayaan buuq badan iyo dhibaatooyin marka loo eego xaaladaha ka duwan.
Sida for Kamarada Selfie waxaan haynaa 16MP oo leh f / 2,4 oo leh "qaab quruxsan" oo aad loo xoojiyay laakiin ma yeelan doono dhibaatooyin guud ee sawirka selfie. Duubista fiidiyowga Waxaan kugula talinayaa inaad fiirsato fiidiyowga la socda maqaalkan halkaasoo aad ku leedahay imtixaanka qoto dheer, gaaban: Xasilinta ku filan, waxay la il daran tahay isbarbardhigga iyo kala duwanaansho firfircoon oo wanaagsan oo loogu talagalay duubista 4K iyo SlowMo ee 960FPS.
Realme 9 Pro + tan, mar labaad shirkaddu waxay raadineysaa inay bixiso jibbaarada ugu badan marka loo eego saamiga hardware / qiimaha, si kastaba ha noqotee, sida had iyo jeer dhacda, waxaan heysanaa in dhexda ay ka maqan tahay astaamo laga yaabo inaan u maleyno inay ugu wacan tahay waxqabadka Inta kale ee qalabka (si khaldan) ee hadda jira. Ikhtiyaar aad u xiiso badan oo ka dhex jira suuqa dhexe waa waxa aan ka helno Realme 9 Pro +.
Qiimaha: realme 9 Pro +: Inta u dhaxaysa 350 iyo 450 euros. Noocyada: 6GB+128GB // 8GB+256GB // realme 9 Pro: Inta u dhaxaysa 300 iyo 350 euros. Noocyada: 6GB+128GB // 8GB+128GB // realme 9i: Inta u dhaxaysa 200 iyo 250 euros. // Noocyada: 4GB+64GB // 4GB+128GB
Dareemka kamarada weyn ee wanaagsan
Iftiin iyo madax-bannaanidu way wada socdaan
Waxqabadka software fudud
Dareemaha qoto dheer ee dheeraadka ah
Codku maaha ilaa shaashadda
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Falanqaynta: Realme 9 Pro +, weerarka dhexda oo ay soo jeedisay sumadda
Realme 9i waa beddelka qiimaha jaban ee ay soo bandhigtay sumadda [Falanqaynta]
Jabra waxay soo bandhigtay nidaamkeeda Multipoint